I-ACE YAMAKREZI: INKCAZELO, INDAWO, INDLELA YOKUTHETHA NOKUNYE
Kwinqaku lanamhlanje siza kukwazisa Inca yesipeyidi, Uya kufumanisa yonke into oyifunayo malunga nale leta imangalisayo, kunye nomyalezo omkhulu osemva kwayo. Dibana nathi.
1 Inca yesipeyidi
2 Inkcazo nge-Ace yenkcazo
3 Iintsingiselo ngokwesikhundla
4 I-Ace yesithuba seSpanish
5 I-Ace yamakrele Tarot Marseille
6 I-Ace yemidibaniso yokudibanisa
El I-ace yamakrele Tarot, yinxalenye yento eyaziwa ngokuba yi-arcana encinci kunye nokubonakala kwayo ekusasazeni kuhlala kunesigijimi esisebenzayo nesisebenzayo, ihlala inentsingiselo exhomekeke kwisenzo kunye nokulwa ude woyise into oyisebenzele nzima.
Likhadi elimele impumelelo kunye noloyiso kwixesha elizayo, nangona likwabonisa iimeko ezinamandla kakhulu okanye ezibi kakhulu ezinokuthi zibe namava. Kuxhomekeke kwindibaniselwano okanye indlela ephume ngayo, inokubonisa ulonwabo olupheleleyo okanye usizi olunzulu kunye nokungazinzi okunokukwenzakalisa ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo.
Ngendlela efanayo, eli khadi lihambelana nesiqalo esitsha okanye amanqanaba okanye imeko echaseneyo yokuvalwa kwemijikelo ebalulekileyo ebomini bakho, enxulumene ngokukodwa nexesha elidlulileyo, izama ukubonisa abantu abafuna ukuzalwa ngokutsha, kwaye benze utshintsho.
Inkcazo nge-Ace yenkcazo
Ukuba sihlalutya ikhadi kulo sigcina umfanekiso wekrele elitsaliweyo eligcinwe ngesandla elinokumela amandla amakhulu okanye aphezulu, lo mfanekiso unokutolikwa njengoloyiso oluzayo kunye nempumelelo, kunye nesibindi namandla ekumelwe bajongane nayo nemiceli mngeni emitsha, nkqu nakwabo bafuna ukuba nosapho, kubonisa ukuzala.
Kwincam yekrele kukho isithsaba, esibonisa ngokupheleleyo uloyiso, kwinto oyilwele kakhulu. Kwangokunjalo, inokubonisa ukuba yonke into oyenzayo nawo wonke umngcipheko owuthathayo ukhokelwa bubukrelekrele bakho, kanye njengokuba unyamezelo lulungile kubomi bakho.
Lo mfanekiso ukwabonisa iintsiba, ezibhekisa kwezi zinto zikhanyayo ezikhanyisa indlela yakho, ezi zimthubi naluhlaza okwesibhakabhaka, ezimele ukwenziwa kwezigqibo ngobulumko, ziya kukuqhubela ukuba ufezekise uloyiso lwakho. Kwangokunjalo, babhekisa kutshintsho lokucinga okuhle, ithemba liyakuthatha.
Kujikeleze ikrele kukho amanye amanani awayo atsala umdla, ezi ziintsiba eziluhlaza ezimele ubulumko, zibomvu isenzo kwaye zimthubi impumelelo.
Okokugqibela, ungazibona iintyatyambo ezisesithsaba ezibomvu nezuluhlaza, oku kutolikwa kutolikwa ukuba yonke into obuyicebisile uyakuyiphumeza, ngenxa yentsikelelo kaThixo emiselweyo kuwe.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda malunga, ileta El Mundo, ngenisa ikhonkco kwaye uyifumane.
Xa kuziwa emthethweni, ihlala imele ezo meko zigqithileyo ezinokuthi zilunge okanye zibe mbi eziya kuxhomekeka koonobumba abalandelelanayo abavela.
Kwizinto zokomoya: Ukumema ukuba uhlale uzolile kwaye uthembe ukuba uya kuba nakho ukoyisa kuzo zonke iimeko onazo.
Kwezothando: Kuya kufuneka ulumke nobudlelwane bakho, inokuba izele bubundlobongela kunye nokuzibandakanya okunokukwenzakalisa, ixesha elinzima linokuza, kufuneka ugcine amehlo akho evulekile kwaye wenze okuthile ukunqanda ukwahlukana okanye uqhawulo mtshato.
Kwezempilo: Unganalo ixesha elibi lempilo, ke kuyacetyiswa ukuba uye kuvavanyo lonyango kwaye uzihlole.
Emsebenzini: Zimele impumelelo enkulu kwinqanaba lomsebenzi, kodwa ungavumeli olu loyiso lukujike lube ngumntu onamabhongo, kwaye ulumke kakhulu ngazo zonke izigqibo ozenzayo.
Xa ibuyiselwa umva, likhadi elilunge ngokupheleleyo, imijikelezo emitsha ivuliwe, impumelelo iyalelwa ebomini bakho.
Kwizinto zokomoya: Sukungakhathali kwaye uhlakulele yonke imihla emoyeni wakho ubulumko kunye nokuqonda okuyimfuneko ukuze uqhubeke.
Kuthando: Ubudlelwane obutsha bujikeleze ikona, yilinde. Ukuba sele utshatile, ixesha lonxibelelwano oluqinisekileyo luya kuqala, oluya kukhokelela kwikhaya lakho kuxolo olukhulu.
Kwezempilo: Unokuqiniseka ukuba impilo yakho ikwimeko efanelekileyo.
Emsebenzini, iiprojekthi zakho ziya kuba nempumelelo, uya kuba nendawo yokusebenza ehambelanayo kwaye amabhaso amakhulu ayeza, kunokuba kukunyuswa kwemivuzo okanye ukunyuselwa.
I-Ace yesithuba seSpanish
Xa ifayile ye- Inca yesipeyidi kwi Umgangatho wespanishOku kubonisa ukungqinisisa kwayo yonke into ebithethwe ngexesha leseshoni, oku kunokuba kokuhle nokubi, ngoko ke lumka kakhulu ngale leta.
Kukwanikwe nokutolikwa ukuba usondele ekuthatheni izigqibo ezinamandla kunye nezizimeleyo ngokubhekisele kwiimeko ezithile ebezikongamele, oku kubonisa ukuqala kwamanqanaba amatsha ebomini bakho, kunye neeprojekthi ezintsha apho kuvavanywa ukuqonda kwakho nobulumko. .
I-Ace yamakrele Tarot Marseille
I-ace yamakrele e-tarot Marseille, inentsingiselo efanayo kakhulu ibonisa ukugqitha phakathi kokulungileyo nokubi. Uloyiso olukhulu okanye ukoyiswa okukhulu kuqikelelwe, kunokubonisa ukonwaba okukhulu okanye usizi olunzulu. Ikwamele umyalezo wokuqinisekisa impumelelo, ukuthanda kunye nesibindi. Iqinisekisa ukuba uloyiso ekuye kwalwelwa okuninzi luqinisekisiwe.
Ngothando imele uthando olukhulu kwaye emsebenzini inamandla amakhulu kangangokuba iya kukuqhubela ukuba uthathe umngcipheko kwaye ezi ziya kuthi zixatyiswe. Kodwa ke lumka xa ikhatshwa yi-arcana engalunganga, kuba inokubonisa ukuba amandla amakhulu ajika abeyinto etshabalalisayo, kukho ukungazithembi okuninzi, isimilo esidubulayo ekufuneka silawulwe, kunye nokugwetywa kosapho kunye nomtshato osecicini lokuwa.
I-Ace yemidibaniso yokudibanisa
Kukho indibaniselwano ye-ace yemigangatho, nangona kunjalo, kweli nqaku siza kuthetha ngeentsingiselo zazo:
I-Ace yee-Spades + I-Ace yeeNgqekembe: Isigqibo esinzulu siyeza esiza kukukhokelela kumvuzo omkhulu wengqondo.
I-Ace yemingxunya + Abathandi: Ndithembe ukuba uza kwenza isigqibo osifunayo kakhulu.
I-Ace yemingxunya + Inyanga: Qaphela isimo sakho sengqondo, kusenokwenzeka ukuba uthatha izigqibo ezingxamisekileyo zothando.
I-Ace yemingxunya + I-La Estrella: Umjikelo omtsha ogcwele amathuba kunye nethemba liyaqala.